Ogaden News Agency (ONA) – Kulan Wadatashi ah oo ay Yeesheen Culumada Soomaaliyeed & Ururka ONLF e Gobolka Minnesota.
Kulan Wadatashi ah oo ay Yeesheen Culumada Soomaaliyeed & Ururka ONLF e Gobolka Minnesota.
Posted by Wariye Qaran	/ November 7, 2018
Manta oo ay taariikhdu tahay 05/11/18 waxuu kulan dhax maray Ururka ONLF iyo imaamyada masaajidada magaalooyinka mataanaha ah (Minneapolis – St Paul) iyo nawaaxigooda.
Kulankaan oo logu marti qaaday culumada soomaaliyeed ayaa ujeedkiisu ahaa wadatashi.
Ururka ONLF waxa ay culumada usheegeen inay ka go,antahay mideeynta umada soomaaliyeed ee la gumaysto iyo guud ahaanba soomaalida. Ururka ONLF wuxu cadeyay inu diyaar uyahay sidii ay u wada shaqayn lahaayeen qaybaha bulshada Somaliyeed ay ka kooban tahay ee samaha jecel. culumaduna waxa ay kamid tahay qaybta oogu muhiimsan, maadaama ay umada u haayaan waxa ugu qiimaha badan oo ah dinta Islamka.
Ururka ONLF waxay mahadbalaran u soo he jeedisay culamadii soo ajiibtay ee qadarisay kulankan qiimaha badan.
Waxaa warbixin kooban culumada lagasiyay is badalada cusub ee Ethiopia kasocda, heshiisyadii ay ONLF lagashay dowlada Ethiopia iyo meesha uu ururka ONLF tiigsanayo o ah in umada Somaliyeed lagadhsiyo fursad ay ayahoda kaga tashan karan. Waxaa culumada lo cadeeyay in mabadida siyasiga ah ee ONLF ee ah gobanima donka inayna waxba iska badalin, balse u ururku go,an saday inu halganki hubaysnaa ay qalin ku badalaan inta laga xaqijinayo ayo katashiga umada Somaliyed e Ethiopia ku hoosjirta.
Warbixin kadib, waxaa culumada loosheegay in loobahanyahay taladooda maadama ay yihiin indhaha umada soomaaliyeed ee xanbarsan diinteena munazalka ah.
Ururka ONLF, waxay culumada u xaqijiyen inay ubaahanyihin qof kastoo qadiyada Somaliyed soo dhaweeya islamar ahaantaana ay diyar uyihin inay qanciyaan ruxii aragti ka duwan aminsan.
Dhanka kale waxay ururku mujiyen inay ka goantahay inay mujtamaca Somaliyeed taladooda iyo su, aalahooda ka dhagaystaan lana tashadaan, oo uu ururku soo dhaweeynayo waxii afkaar ah oo ay umada lagumaysto lagu gaarsiin karo aayahooda.
ONLF waxeey muujisay inay mar walba diyaar u tahay in la isla tashado waxii talooyin ah oo wax ku ool ahna ay ka qaadato culumada soomaaliyeed iyo bulshada qaybaheeda kaladuwan dibad iyo gudaba kulankaana uu ujeedkiisa yahay sidii loga wada tashan lahaa mideeynta umada la gumaysto iyo guud ahaanba soomaalida.
Culumadii halkaa isugu timid waxa ay soo jeediyeen talooyin iyo dardaaranno qiimo badan oo ay ururka siiyeen.
Run ahaantii xubnihii ururka ONLF ee daadihinayay kulankan wada tashiga ah aad ayeey oogu riyaaqeen bisaylka culumada ka muuqday iyo talooyinkoodii qiimaha badnaa ay halkaa ka soo gudbiyeen.
Gabagabdii shirka waxay labada dhinac muujiyeen in xilligaan loo baahanyahay in laga wada shaqeeyo danta guud iyo mideeynta ummada la gumeysto iyo guud ahaanba soomaalida. Waxaa la isla afgartay in kulumada noocaan ah joogta laga dhigo si wada tashiga labada dhinac uu unoqdo mid xoogan oo mira dhalin kara.
ONA/Abdikhaliq Sh Cabdicasiis.